Uphononongo: El carbonero, nguCarlos Soto Femenía | Uncwadi lwangoku
Uphononongo: El carbonero, nguCarlos Soto Femenía
KuSeptemba ophelileyo, Indawo yokuHlela isungule esinye sezindululo zayo ezinkulu zonyaka ezibandakanyiweyo kwingqokelela yayo Anchor kunye neDolphin: El carbonero, nguCarlos Soto Femenía. Inoveli ebekwe emaphandleni eMallorca ngeminyaka yoo-50 apho abalinganiswa abohlukeneyo babesenziwa luloyiko, ukuziphindezela kunye nendalo engafakwanga ndawo. Siya apho kunye nohlolo lwakho.
La sitja, ukwakhiwa kwe-rustic kwimveliso yamalahle aqhelekileyo avela eSierra de Tramuntana, eMallorca. Le barrack iqhotyoshelwe apha njengendawo yokubalekela isitshisi samalahle iinyanga. Izinto ezimbini eziphambili kuseto lwe-El Carbonero. RaUkuhambahambaMallorca.
Isitshisi samalahle siqala ngokubulala umama kaMarc, inkwenkwana eneminyaka elishumi elinesithathu kunye nonyana wesitshisi samalahle esivela kufutshane nedolophu yaseCaimari, kwisiqithi saseMallorca. Umnyhadala ojikeleze ibali liphela, ubonakalisa utata kunye nonyana bedityaniswa bodwa kwiminyango yeholm kunye nokutshiswa kwe sitja, indawo yokugcina iimpahla apho utata kaMarc enza amalahle. Umthengisi, indoda ehlala inxulunyaniswa namatyala, ngomnye wabamelwane bakhe, ngelixa abantwana bakhe ababini, uArnau noAina, baba ngamaqabane kaMarc kuyo yonke iminyaka esixhenxe edlulayo de umlinganiswa ophambili, oqhubeka etsala inkanuko yokuziphindezela. yenza ubulungisa kwaye ufumane ababulali bakanina. Iimpendulo azizukuthatha thuba lide ukuba zivele kwindawo yabo, ukuqala uhambo oluphawulwe ngumsindo nobundlobongela.
U-El Carbonero ngumdlalo wasezilalini, ngaphezulu kwako konke, obhalwe ngokuqaqambileyo. Ngapha koko, ekupheleni kwencwadi umbhali ngokwakhe uphonononga uluhlu lweencwadi ezimvumileyo ukuba azibeke kwindawo leyo engaziwa kuncwadi lwelizwe lethu ajike umbhali abe yimicocosm eluhlaza nasendle apho bonke abalinganiswa baphawulwa uloyiko lwabo luphila ngokuntywiliselwa kunye nesihogo. Ngenxa yoko, lo msebenzi ubalasele ngobukhulu bawo, phantse umbongo, apho uSoto Femenía asisondeza kuthuliso lwe-oki ye-holm, ukungcola kwamalahle okanye ukuncwina kwenkanuko phakathi kwabalinganiswa bayo, kuba inoveli ikwabandakanya uthando unxantathu kwezona zibalaseleyo.
Umsebenzi olungileyo ovumela ukuba ukonwabele ibali elilula kodwa elisebenzayo, eliqukethe Isahluko seshumi elinesibhozos kodwa oko kungohlulwa ngokugqibeleleyo kwiibhloko ezintathu apho singqina khona eyona njongo iphambili yomsebenzi: Umnqweno kaMarc wokuziphindezela, ophambili kuwo.
Umbhali: UCarlos Soto Femenía
UCarlos Soto Femenía, umbhali we-El carbonero.
UCarlos Soto Owesetyhini (UPalma de Mallorca, ngo-1966) wachitha ubuntwana bakhe kunye nokufikisa eMadrid, apho wakhulisa khona ukuthanda uncwadi njengendlela yokubonisa eya kumkhokelela ekubeni afunde ifilosofi. Kungekudala emva koko, wayenomdla kubuchwephesha obutsha, waqala ikhondo lakhe lobuchwephesha bekhompyutha eMallorca, indawo apho usapho lwakhe lwaluza kubuya khona emva kweminyaka. Ukusukela ngoko ukuya phambili, uFemenía wazinza ePalma de Mallorca, apho aqala khona ukusebenza njengesazinzulu sekhompyuter, kodwa engalibalanga ukubhala amabali amafutshane anikezelwa kukhuphiswano lweencwadi, phakathi kwabo iSilverio Lanza de Getafe, kunye neenoveli ezinje nge Intambiso (Ibhaso lika-Alfonso VIII) okanye Utshaba oluninzi (Ikaba lolwandle, 2004).
Kwiminyaka eyalandelayo, kwelinye lala maxesha "wokubhadula" kwi-Intanethi, njengoko watshoyo kutsha nje kudliwanondlebe, uSoto Femenía wadibana nenqaku elalithetha ngesitshisi samalahle owathi, de kwayiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, waqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe Ihlabathi apho ukunyuka kwetekhnoloji kubonakala ngathi kusenze sakulibala ubukho baloo misebenzi ilula, yamadoda asahlala ebophelelwe ngumhlaba kunye nemozulu embi.
Oku kubonakalisa ukuqala kwe-El carbonero, inoveli epapashwe yindlu yokupapasha iDestino Nge-Septemba ephelileyo kwaye ikhathalogwe ngamanye amazwi, kubandakanya nalawa afanayo U-Lorenzo Silva, njenge "incasa enqabileyo."
Uyathanda funda uEl Carbonero?
Ngaba sele uyifundile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Uphononongo: El carbonero, nguCarlos Soto Femenía